Filtrer les éléments par date : mercredi, 07 octobre 2020
mercredi, 07 octobre 2020 22:27
Pilo kely: Merci Rajao RN13
"Tsy hiverina aty atsimo zaho raha tsy vita ny RN13" nandritra ny fampielezan-kevitra, niova indray hoe "Tsy hanao politika intsony zaho raha tsy vita ny RN13" rehefa lany filoham-pirenena andriamatoa Andry Rajoelina.
Fa na izany Merci Rajao RN13, ny fitondrana teo aloha notarihan'i Hery Rajaonarimampianina no nahavita ny fifampiraharahana ara-bola rehetra momba io lalam-pirenena RN13 io, hiriana ho vitan'ny fitondrana mandimby.
Tsy azo atao loranjy kosa ny lokon'ny marquage au sol an, tsy maintsy fotsy iny.
Lalam-pirenena faha 13, mampitohy an'i Ihosy - Tolagnaro, mamakivaky ny faritra Ihorombe, Androy ary Anosy. 493km ny halavany.
mercredi, 07 octobre 2020 21:54
By Pass: Lehilahy nitaingina bisikilety handeha hiasa maraina, maty nofaohin’ny taxibe
Maty tsy tra-drano ilay raim-pianakaviana iray nitaingina bisikilety, handeha hiasa androany maraina, nofaohin’ny taxibe manao zotra Ambohimangakely – Ankadimbahoaka.
Teny amin’ny lalana By Pass - Antananarivo, misy ireo mpikirakira vato, atsimon’ny Domaine Alasora no niseho ny loza.
Nasaina nesorina haingana teo amin’ny toerana nitrangan’ny loza ny faty, fa handalo eo ny fiara mitondra ny filoham-pirenena hiazo ny lapam-panjakana Iavoloha.
Nakisaka nankeo an-tsisindalana ilay faty, avy eo dia ny fiara fitondrana marary an’ny Kaominina Alasora no naka azy teo.
mercredi, 07 octobre 2020 21:38
Bejofo Ambatondrazaka: Avotra ilay tovovavy nataon'ny andian-jiolahy takalonaina
Tovovavy iray, 22 taona, no nataon'ny andian-jiolahy, mitam-piadiana nanafika, takalon'aina tao Anandrobe Kaominina Bejofo, Distrika Ambatondrazaka, Faritra Alaotra-Mangoro, ny alin'ny 05 oktobra 2020.
Jiolahy miisa sivy no nanafika, ka vola 5 hetsy Ariary sy finday miisa telo no lasan'izy ireo. Nentin'izy ireo natao takalon'aina ny tovovavy iray zanaky ny tompotrano.
Nanao ara-dia avy hatrany ny Zandary, nampian'ireo Fokonolona teo an-tanàna. Tsy lasa lavitra fa teo Ambatomarozafy Fokontany Anandrobe ihany dia navotsotr'izy ireo ilay tovovavy, rehefa tsapan'ireo jiolahy fa ho mafy ny fifandonana.
Mbola karohina ireo olon-dratsy.
mercredi, 07 octobre 2020 21:00
LTP Ambatondrazaka: 9 volana tsy nandray karama
Nanao hetsika fanairana ny mpitondra ireo mpanabe, mpiasa birao ECD sy « vacataire » eo anivon’ny lisea teknika na LTP Ambatondrazaka ny talata 06 oktobra.
Mitaraina izy ireo fa sivy volana izao tsy nandray karama, nefa hiditra indray ity ny taom-pianarana vaovao 2020-2021.
Nametraka sorabaventy teo anoloan’ny vavahady ihany koa izy ireo ho fanamafisana ny fitakiana.
mercredi, 07 octobre 2020 20:51
Zava-kanto: Nitondra fanazavana ny ministeran'ny serasera mahakasika ireo hira nasaina nesorina
Nampiantso mpanao gazety teny amin’ny tranombokim-pirenena ny teo anivon’ny ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina tamin’ny alalan’ny Tale jeneralin'ny Serasera mpisolo-toerana sy ny tale jeneralin’ny kolontsaina, mahakasika ireo hira nasaina nesorina tamin’ny hainoaman-jery misokatra ho an’ny besinimaro.
Hira telo hatreto no nesorina nanomboka ny taona 2019.
Nanao antso avo izy ireo ho fanentanana sy fampatsiahivana ho amin’ny fandraisan’andraikitry ny mpanakanto amin’ny fanabeazana ny fiaraha-monina mba tsy hiaotra amin’ny mamohafady amin’ny fiaraha-monina amin’ny famoronana ny kanto.
mercredi, 07 octobre 2020 20:50